Xasa Sheekh oo war raali-gelin ah ka qoray Imaaraadka Carabta - Caasimada Online
Home Warar Xasa Sheekh oo war raali-gelin ah ka qoray Imaaraadka Carabta
Xasa Sheekh oo war raali-gelin ah ka qoray Imaaraadka Carabta
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qoraal raali gelin u muuqda oo aan wax munaasbad ah lahayn kaasoo lagu amaanayo dowladda Imaaraadka Carabta.
Xasan Sheekh oo xilka ka dhammaaday ayaa dhowaan ka hadlay heshiis shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay la gashay maamulka Somaliland kuna saabsanaa maamulka dekadda Berbera oo sharci darro ku tilmaamay ayaa maalmo yar kadib waxaa xigay inuu ka soo baxay warkan.
Qoraalka ay baahisay madaxtooyada ayaa lagu bogaadin sida aadka ahna loogu amaanayo Imaaraadka Carabta oo luqado dhowr ah lagu qoray laguna faafiyay warbaahinta dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaliya Mudane Xasan Sheekh Maxmuud ayaa sheegay in Dwaladda Imaaraadka Carabta ay kaalin mug leh ka qaadato dib u dhiska Soomaaliya.
Bayaan laga soo saaray Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in dalka isutagga Imaaraadka Carabta uu yahay dal saaxib dhaw la ah Soomaaliya mar kastana u taagan gacansiinta shacabka Soomaaliya horayna uga qeyb qaadatay taageeradooda ee arrimaha bni’adnimada la xiriirta
Madaxweyne Xasan wuxuu cdeeyay in Dawladda iyo Shacabka Soomaaliya ay aad u qadarinayaan kaalmada aan shuruudda ku xirneyn oo ay Xukuumdda Imaaraadka u fidiso Soomaalia siiba dhinacyada Arrimaha Bulshada ,wuxuuna xusay in labada dal ay wadaagaan arrimo badan uunaka dhaxeeyo iskaashi dhinacyo badan leh siiba Ganacsiga iyo xiriir Taariikhi ah ah ee soo jireen ah.
Madaxwynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxmuud oo ah musharax u taagan mar labad hanashada xilka Madaxweyninimo ayaa ballanqaaday hadii uu mar kale madaxtinimada dalka Soomaaliya ku soo laabto uu sii xoojin doono CilaaqaadkaSoomaaliya iyo Imaaradka ee dhinacyad badan leh uuna gaarsiin doono meesha ugu sareysa.